Warmly Welcome: စိတ်ကူးယဉ်တယ် .. ..
အကိုရေ စိတ်ကူးယဉ်လေးလာဖတ်သွားတယ်ဗျာအကို။ ဘောလုံးသာမားတွေက အကိုကရဲ့အိမ်မက်ဆိုရင် အကိုက ဘောလုံးပွဲကို တော်တော်လေးနှစ်သက်ပုံရတယ်နော်အကို။ စိတ်ကူးယဉ်လေးကောင်းတယ်အကိုရေ။
စိတ်ကူးယဉ်ထားတာလေး လာဖတ်ပါတယ်... ရေးသမျှက တန်ဖိုးကြီးစာတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်... :)
(မရှိတဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက် အကြောင်း) ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြော်ငြာနေသလိုပါပဲ။
အကိုရေ စိတ်ကူးယဉ်တာ သတိလဲထားဦးနော်
စိတ်ကူးယဉ်တာလေးကောင်းတယ် အကိုရေ..မရှိသေးတဲ့ ရည်စားလဲရှိလာပါစေဗျာ
စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုခိုးချလို့ရအောင်လာဖက်သွားပါတယ်ရှင် :P အပိာ ။ဒီအကိုကတော့ ရည်စားမရှိတာပါ ထည့်ကြွားနေပြန်ပါပြီ။
လူတိုင်း လူတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်သမားတွေပါပဲ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို မဖြစ်ခင် ကြိုတင် စိတ်ကူးကြည့်ပြီး၊ စိတ်ကူးနဲ့အညီ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြတယ်။ စိတ်ကူးကွန့်မြူး တဲ့သူရဲ့ တီထွင်မှုတွေက အများအကျိုးကို ဆောင်ပါတယ်။ အချစ်အတွက် စိတ်ကူးယဉ် တာထက် အနာဂတ်အတွက် စိတ်ကူးယဉ်တာ ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့မရှိသေးတဲ့ရည်းစားလည်းရပါစေ. ဒီထက်မကလည်း စိတ်ကူးတွေယဉ်နိုင်ပါစေ.
ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေကို ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီး စာရေးထားပုံကလည်း ဆီလျော်လို့
-ကားမောင်းရင်းနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နေရင်လည်း ကိုယ်မောင်းတဲ့ ကားက ချောက်ထဲ ရေဆင်းသောက်ဖို့ပဲ ရှိတော့မှာလေ- အဲနေရာလေး သဘောကျတယ် ပုလဲတို့များအရေးတတ်ဝူး
ဆက်ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်စွာ စိတ်ကူးယဉ်နိူင်ပါစေ
လေးနက်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိူင်ပါစေ ... :)
မိုက်တယ်ဗျ၊ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကူးယဉ် ချင်သေးတယ်၊ အလှမယ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ပေါ့။
happy new year ဖြစ်ပါစေ။